Helista shaqo waxay qaadanaysaa wakhti iyo dedaal. Waxa laga yaabaa inay kugu qaadato dhawr todobaad ama xiitaa bilo si aad u heshid shaqo. Waxa jira goobo gaar ah oo aad ka raadin kartid shaqo iyo dhawr wax oo aad sameyn kartid oo kaa gargaari karaa inaad heshid shaqo. Fiidiyowgan, waxa aad ku baran doontaa waxa aad u baahan doontid inta aad raadinaysid shaqo.
Wax ka baro waxa aad u baahan tahay si aad u bilawdid shaqo raadin, sida looga hadlo naftaada ee looga dhaadhiciyo dadka kale iyo meesha laga raadiyo shaqo. Helista Shaqo
Haddii aad u baahan tahay war aad ku heshid luqaddaada hooyo, waxa jira meelo aad u tagi kartid gargaar. Hay’adahaasi waxay haystaan shaqaale ku hadla af Soomaali oo bixiya gargaar shaqo raadin iyo adeegyo bulsho oo kale oo ah bilaash ama la goyn karo. Hay’adaha u Adeegga Soomaalida Hay’adahani waxay bixiyaan gargaar ah bilaash ama la goyn karo sida tababar farsamooyin shaqo, fasallo ah Ingiriisi ama kombiyuutar, gargaar ah muwaadinnimada iyo dheeraad. Qaar ka mid ah adeegyadaas waxa lagu bixiyaa luqado kala duwan, laakiin badi waxa lagu bixin doonaa Ingiriisi.